Brand Aid: Iyo Nyika YeBranding | Martech Zone
Ini zvakaitika kune yakakura pambiru manheru ano nezve State of Branding. Handibvumirane zvachose nemunyori, Brad VanAuken, asi ini ndaida kuwedzera mapoinzi mashoma. Pave nemakore akati wandei kubvira ini ndashanda zvine hunyanzvi uye pamwe nevatariri vemagetsi epamberi, asi ini ndoda kugadzira poindi yakakosha ingave iri pachena asi zvinoda kutaurwa.
Ndichiri muindasitiri yemapepanhau mumakore gumi apfuura, ndakaona kudzikira kuri kukura mukugona kudzora kana kubata zita. Nekuona, zvainge zvichiri nyore… iwo mavara, marogo, uye chigadzirwa hazvina kuchinja. Zvisinei, iyo muchiso akaita. Mucherechedzo wakashanduka kubva kunze mukati.
Mharidzo yedu uye chiono zvaienderana. Zvisinei, iyo nzira kuburikidza nevanhu vakagamuchira iyo muchiso yanga ichichinja kubva kwatiri ichienda kuvanhu, kuburikidza neInternet, kuburikidza nevanhu vedu vekuendesa, kuburikidza nevanhu vedu vevashandi, kuburikidza nevatengi vedu, kuburikidza nemakwikwi edu epamhepo, nezvimwe.
Yaive bhizinesi semazuva ese. Isu tese takazunguzira uye kunyemwerera uye takanongedza minwe yedu sezvo aya masvikiro akataura nekuita zvinhu zvaitiparadza, uye isu hapana chatakaita. Nekuda kweizvozvo, iyo mhando yakatanga kukundikana - uye ivo vachiri kukundikana. Ndakazviona, ndakaridza mhere, ndikaratidzwa nzira yekubuda nayo (nekutenda).
Dzimwe nguva hazvikurumidze mune mamwe maindasitiri, asi tiri kuona shanduko iyi kwese kwese. Panyaya ndeyekuti mamaneja echiratidzo chako ari kuita chimwe chinhu nezvazvo here kana kwete. Ndeapi mamaneja ako echiratidzo ari kutaurirana zvinobudirira ndeipi meseji iri iyo kambani yako iri kuyedza kuendesa kune vatengi vayo kuburikidza neaya matsva masvikiro? Vashandi vako vese ikozvino vanoziva here kuti ivo vari kutarisira iyo mhando? Ivo vanopihwa mutoro wazvo here? Vanodzidziswa sei kubata neizvi? Ko iwo mablog avo anoti chii nezve yako mhando?
Iye zvino zvinonzwika kupfuura yako maneja maneja ndiyo mhando yekambani pachayo. Ini ndinotenda Mr. VanAuken vanoita basa rakakura rekutsanangura izvi. Kukudza nyaya isarudzo. Vatengi vanoburitswa musarudzo nyowani nekukurumidza sezvavanonzwa nhau dzakaipa nezvechako. Nyaya iripo, humwe husiku ini posted pamusoro Swapagift.com. Mushure mekutumira, ndakasangana neforamu iyo yaitaura nezve sevhisi uye ndikawana imwe sevhisi inotsanangurwa muchiedza chiri nani… CardAvenue. Mukati memaminetsi ini ndawana chigadzirwa chikuru (ASI kuburikidza nekushambadzira kwayo) uye ndikawana mumwe mupi wechigadzirwa chimwe chete (HASI kuburikidza nekutengesa kwavo)!
Zvinoshamisa kuti nhau dzakaipa dzinokurumidza kufamba sei uye makwikwi anomuka. Kunyanya kupfuura nakare kose, wako Brand Manager anoda kuisa zvakanyanya kuyedza kutaurirana mukati sezvaari kuita kunze. Ivo vanofanirwa kuve muevhangeri uye murairidzi kune vese vashandi vako. Sevhisi yako, chako chigadzirwa, uye kupfuura zvese, vanhu vako ndivo vako vepamhepo sosi yekutaurisa yako brand. Vari sei?
Tags: muchisobranding zanomamiriro ekushambadzira
Ndinonzwa rombo rakanaka, semuzvinabhizimusi wekutanga, kuti ndakadzidza nezve social network uye kuzvipa zita kubva pakutanga. Muchinyorwa chawakataura, munyori akasimbisa aya mapoinzi: "kuziva, kuwanikwa, kukosha, kusiyanisa kwakakodzera uye kubatana kwepfungwa." Ndiri kushanda pakurova zvibodzwa izvi pandinokura. Chandinotarisa ikozvino kupa kukosha kwemahara, kuvaka kuvimbika. Uyezve, ini handisi kubatikana neakazvimba bureaucracy. BTW, ndiri kuita zvakanaka!
Vince, prop chete., eBay mutengesi, sei-kunyora.